Virginia Mukwesha visits austria / Windhund Zimbabwe Rewind
Created: Wednesday, 18 June 2003 00:00
In autumn 2002, the Austrian musician Otto Lechner and "Windhund" group visited the Tonga area and performed during the Summer Jazz Festival in Harare to promote the Tonga.Online project. Half a year later the "Windhund Zimbabwe Rewind" programme presented an account of impressions and samples of music from their Zimbabwe tour in Austria. They were joined by Virginia Mukwesha and her Mbira-Trio from Harare, who are quite popular for their fusion of traditional and contemporary music styles.
Windhund Zimbabwe Rewind! Featuring Virginia Mukwesha Trio from Zimbabwe!
Created: Monday, 26 May 2003 00:00
26th May Gasthaus Vorstadt, Vienna
29th May Porgy & Bess Jazzclub, Vienna
May 31st Kultur am Land, Jenbach, Tirol
June 2nd Linz International School, Linz/Auhof
6th June Wirtshaus Pammer / Hirschbach OÖ
July 6th Kasumama Festival, Waldviertel